श्रेणी: एन्ड्रोइड | देखाउनुहोस् शीर्ष
एन्ड्रोइड कसरी गर्ने कुनै टिप्पणी BISH Jaishi
कसरी गुगल प्ले सेवा रोकिएको छ समस्या वंश OS मा समाधान गर्न 15.1?
एन्ड्रोइड कसरी गर्ने 1 comment BISH Jaishi
कसरी रोम स्थापना पछि Android bootloop समाधान गर्न?
सामान्यतया पछि नयाँ रोम चमकता, यस्तो वंश ओएस रूपमा, तपाईं एक bootloop भेट हुन सक्छ. महत्त्वपूर्ण: जगेडा तपाईंको डाटा, केही गलत जान्छ भने यो नष्ट गर्न सक्छन्. तपाईँको यन्त्र चमकता स्थायी यसलाई बिगार्न सक्छ, so doing so would be at your own risk To remove the bootloop, TWRP प्रयोग गर्न सुनिश्चित. Boot into TWRP…
Join 56 अन्य ग्राहकहरु